वाम–विजयपछिको राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
मंसिर २७, २०७४ रमेशनाथ पाण्डे
परम्परा र संस्कार परिवर्तन सहज त हँुदैन । तर अब अर्को विकल्प छैन, खोज्ने प्रयासमात्र भयो भने पनि नेपाल दुर्घटनामा पर्नेछ ।
आम नागरिकको दृष्टिमा राज्यको परिभाषा र हैसियत पनि हठात परिवर्तनको संघार नाघेर विलकुलै नयाँ अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । सिंहदरबारको स्थिरतावादी मानसिकता र प्रदेशहरूको चमत्कारी परिवर्तनको अपेक्षाबीचको दूरी, केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच स्रोत र साधनको संकलन तथा उपयोगको पेचिलो प्रश्नसँगै शक्ति विकेन्द्रीकरण, स्रोत र सुविधाको भागबन्डाजस्ता संवेदनशील चुनौती आउनेछन् । तर यसमा आत्तिनु हँुदैन । सात दशक लामो अभ्यासपछि पनि भारतको संघीयताले केन्द्र र प्रान्तहरूबीच मनोमालिन्य भोगिरहेकै छ । नेपालमा पनि साविकदेखि हुर्किएको केन्द्रको आत्मकेन्द्रित सोच र शैली तथा भर्खरै आकांक्षाको स्वप्न संसारलाई विपना बनाउने लक्ष्य देखाएर गठन भएका प्रदेशहरूबीच द्वन्द्व स्वाभाविक हुन्छ । यसलाई सकारात्मक र रचनात्मक बनाउनुपर्छ र यो दायित्व निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको हो ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विलकुलै नयाँ संकल्पनालाई सम्पूर्ण नेपालीको हितको साधन बनाउन जनतामा धैर्य र देशमा स्वप्नद्रष्टा नेतृत्व आवश्यक छ । प्रादेशिक आकांक्षाको चुनौतीलाई संयम र विवेकबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ । प्रदेशहरू, त्यहाँका बिभिन्न वर्ग र क्षेत्रको आकांक्षा चित्तबुझ्दो ढङ्गमा पूरा गर्न नसकेपछि मनोमालिन्य सुरु हुन्छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ल्याकत नेतृत्वमा भएन भने द्वन्द्व र हिंसात्मक विरोध अनि विखण्डनको क्रम सुरु हुने शिक्षा विश्व इतिहासले दिएको छ । आर्थिक हैसियतमा युरोपियन युनियनका २७ मध्ये १२ औँ हैसियत राख्ने क्याटालुनाले हालै स्पेनबाट छुट्टिने निर्णय गर्‍यो । जनमत संग्रहद्वारा अस्वीकृत भएपछि पनि स्कटल्यान्ड ब्रिटेनबाट अलग्गिने अडानमा नै छ । तर निर्धन पूर्वी जर्मनी सहज ढङ्गमा पश्चिम जर्मनीसँग पुनर्एकीकरण भएर जर्मनी संघीयताको सफल नमुना तथा विश्व नेतृत्वको दाबेदार बनेको उदाहरण पनि छन् । बालुवाटारको बासबाहेक अरू नदेख्ने आँखा, आफूबाहेक देश र जनताको हित नसोच्ने मानसिकता र दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा धनी राजनीतिक नेता बन्ने बाहेक अरू सपना नदेखेको नेतृत्व भएको नेपालले अब घोरिनुपर्छ । साविकमा नभोगेको यस्तो गम्भीर चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दा सामान्य त्रुटि भयो भने इतिहास र भूगोल दुबै दुर्घटनामा पर्नेछ । तर यो चुनौतीलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने नेपाल सबै किसिमले बलियो हुनेछ ।
अद्यावधिक चुनाव भएरमात्रै प्रजातन्त्र संस्थागत हुँदैन, सुरक्षित पनि हँुदैन । यो पाठ तीनपटक चुनाव गराएपछि असफल भएको दोस्रो संसदीय व्यवस्थाले पढाइसकेकै हो । पछिल्लो हप्ता तेस्रो संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत पनि तेस्रो आमचुनाव सम्पन्न भएको छ । चुनाव जितेकाहरूले यो विजयलाई ५ वर्षका लागि अभयदान ठानेर जनसमर्थनको दुरुपयोग गर्दै आन्तरिक निराशा र नेपाललाई घेर्ने चक्रव्यूह बनाउन तल्लिन बाह्य षडयन्त्रमा ध्यान नदिएर परिस्थितिलाई विस्फोटक बनाउने गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन । दोस्रो संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत भएको तेस्रो आमचुनावमा बहुमत पाएर पनि नेपाली कांग्रेसले स्थायित्व दिनसकेको थिएन । जनताको भलो गर्ने सट्टा नेताहरूको बालुवाटारमा बास बस्ने रहर मेटाउन दोस्रो संसदीय व्यवस्थाको तेस्रो प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षे कार्यकालमा कांग्रेसले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री तीनपटक फेरेको थियो । अन्त्यमा तेस्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा दोस्रो संसदीय व्यवस्था नै दुर्घटनामा पर्‍यो । नेपाली कांग्रेसको गल्तीले प्रजातन्त्रले पटक–पटक भोगेको क्षति कसैले पनि कहिल्यै बिर्सनुहुन्न । छैटौं संविधानअन्तर्गत सम्पन्न आमचुनावबाट गठित पहिलो प्रतिनिधिसभाले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रत्येक चुनाव पीडादायी अनुभवमाथि आशाको जित हो । तर चुनाव नै लक्ष्य हैन, लक्ष्यमा पुग्ने कानुनी र नैतिक ताकतमात्रै हो । सक्षम नेतृत्व पायो भने प्रत्येक निर्वाचनले प्रगतिको लामो यात्रामा छलाङ लगाउँदै अघि बढ्छ । उदाहरणका लागि सय वर्षभन्दा बढीको जर्मन उपनिवेश र २४ बर्ष दक्षिण अफ्रिकाको स्वामित्वको दाबी तथा संयुक्त राष्ट्र संघको ट्रस्टिसिपमा आत्मसम्मान बिनाको जीवन बिताएको अफ्रिकी देश नामिबियाले नेपालले दोस्रो संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास सुरु गरेकै वर्ष सन् १९९० मा स्वतन्त्रता पाएको थियो । असी दिनमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफ्नालागि उपयुक्त राजनीतिक व्यवस्था तय गरेर पहिलो संविधान जारी गरे । त्यहाँ राजनीतिक स्थायित्व कायम रहेको छ, संसदको पाँचपटक अद्यावधिक चुनाव भइसकेको छ । तर किन नेपालमा पाँचवटा संविधानको असफलतापछि बनेको छैटौं संविधानले पनि आफ्नालागि उपयुक्त शासन व्यवस्था टुङ्गो लगाउन नसकेर प्रमुख संविधान निर्माताहरू संसदीय व्यवस्था अनुपयुक्त भएको कुरा जनतालाई सम्झाउन थालेका छन् ? किन नेपाल राजनीति प्रयोगमा नै अल्मलिरहेको छ ?
प्रमुख सहयोगी दलद्वारा छिड्की हानेर पछिल्लो संसदका तीनजना प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये पहिलो लडेका थिए । यसपछि भागबन्डाको आधारमा पालैसँग माओवादी र नेपाली कांग्रेसका प्रमुखहरूले बालुवाटारमा बास बस्ने अतृप्त रहर मेटाए । तर यसक्रममा राजनीतिक मूल्यमाथि निरन्तर प्रहार भयो । राजनीतिक दलको नैतिक धरातल कमजोर बनाएर प्रजातन्त्रको भविष्यमा चिन्ता जन्मायो । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभामा पछिल्लो संसदमा छिड्की हानेर सत्ता हत्याउने र छिड्की खाएर सत्ता गुमाउने दलहरूले नै गठबन्धन बनाएर बहुमत ल्याएका छन् । विश्वको स्थापित प्रजातन्त्रमा अकल्पनीय यस्तो गठबन्धनले सत्ताको राजनीति र सिद्धान्तको राजनीति बीचको आधारभूत भिन्नता नेपालमा हराएको छ । तर यो गठबन्धन मतदाताद्वारा अनुमोदित भइसकेको छ । यसैले राष्ट्रिय हित, दीर्घकालीन सोच एवं इतिहासको डर मानेर यो गठबन्धनले मतदाताको सामुहिक विवेकको इज्जत राख्छ अथवा दोस्रो संसदीय व्यवस्थामा जस्तै अहंकार र अकर्मण्यता दोहोर्‍याएर दुर्घटना निम्त्याउँछ भन्ने विश्व समुदाय र दुबै छिमेकीको उत्सुकता रहेको छ ।
राष्ट्रका मूल नीतिहरूमा अस्थिरता रहेको मात्र हैन, आफंैले बनाएको संविधानले टुंग्याएको शासन व्यवस्थामा पनि तीन दलबीच मतभेद छ । परराष्ट्र्र नीति विशेषगरी छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा प्रमुख दलहरू बीचको मनोमालिन्यले दीर्घकालीन चिन्ता बनाएको छ । पहिलो पटक नेपालका प्रमुख दलहरूलाई अमूक देशपक्षीय र अमूक देशविरोधी भनेर चिनाइन थालिएको छ । नेपालको भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा विसंगति, नीतिगत चञ्चलता देखिएर पत्यार घटेको मात्र हैन, काठमाडौं, नयाँदिल्ली र बेइजिङबीच विश्वासको घाटा (डिफिसिट अफ ट्रष्ट) बढिरहेको छ । भारत, चीन र अमेरिकाले नेपालमा सामरिक चासो बढाइरहेका नाजुक अवस्थाको गहिरो भूराजनीतिक यथार्थ बुझ्न त्रुटि गर्नु हँुदैन । शक्तिशाली देशहरूले बनाउने चक्रव्यूहभित्र पसेपछि निस्कन खोज्दा ठूलो जोखिम भोग्नुपर्छ, त्यसभित्र बसिरहे राजनीतिक स्वामित्व गुम्छ । कुठाउँमा बढी बोलेर चतुर्‍याइँ देखाउन खोज्दा विपत्तिले निमन्त्रणा पाउँछ । नेपालका लागि दिशा निर्धारणको ऐतिहासिक समय सुरु भएको छ ।